Japan si loo fududeeyo xayiraadaha gelitaanka ee socdaalayaasha la tallaalay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jaban ee Japan » Japan si loo fududeeyo xayiraadaha gelitaanka ee socdaalayaasha la tallaalay
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Jaban ee Japan • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Kaliya shahaadooyinka tallaalka ee Pfizer iyo BioNTech, Moderna iyo AstraZeneca ayaa laga aqbali doonaa dadka ajnebiga ah.
Japan inay aqbasho shahaadooyinka tallaalka Mareykanka, Midowga Yurub iyo Jabaan ee booqdayaasha.
Dowladda Japan ayaa sidoo kale tixgelinaysa fududeynta xannibaadaha gudaha ee COVID-19.
Qaar ka mid ah khubarada caafimaadku waxay ka digayaan halista qaadista xayiraadaha xilli hore.
Mas'uuliyiinta dowladda Japan waxay ku dhawaaqeen inay damacsan yihiin inay dabciyaan shuruudaha karantiil ee COVID-19 ee kuwa soo galaya waddanka oo wata shahaado xaqiijineysa tallaal buuxa oo ka dhan ah coronavirus horaantii Sebtember ee sannadkan.
Sida laga soo xigtay warbixinnada bilowga ah, muddada karantiilnimada ka dib markii laga gudbo xadka Japan ayaa la gaabin doonaa laba toddobaad illaa 10 maalmood.
Kaliya shahaadooyinka tallaalka leh Pfizer iyo BioNTech, Moderna iyo AstraZeneca ayaa laga aqbali doonaa dadka ajnabiga ah.
Shahaadooyinka tallaalka waa in sidoo kale laga soo saaraa USA, dalalka EU ama Japan, si loo aqbalo.
Goor sii horreysay, Wasaaradda Caafimaadka Japan waxay joojisay adeegsiga qiyaastii 1.63 milyan oo qiyaasood Tallaalka Moderna laga bilaabo saddex dufcadood oo laga soo saaro Spain. Diyaarinta waxaa laga helay walax aan la garanayn.
Dowladda ayaa sidoo kale la filayaa inay go'aan ka gaarto ballaarinta xaaladda degdegga ah ee COVID-19 hadda wixii ka dambeeya taariikhda dhicitaanka Axadda illaa Sebtember 30 ee Tokyo iyo 18 degmo oo kale, maadaama isbitaallada ay weli ku jiraan culeys, ilo ka tirsan xisbiga talada haya ayaa sidaas sheegay.
Waqtigan xaadirka ah, dadka waxaa laga codsaday inay ka fogaadaan inay ku safraan xuduudaha gobollada, laakiin safarada noocan oo kale ah ayaa suurtagal ah haddii dadku dhammaystiraan nidaamkooda tallaalka ama ay tusi karaan caddaynta tijaabada COVID-19 ee taban, ilaha aqoonta u leh qorshaha ayaa sheegay.
Dawladdu waxay sidoo kale qorshaynaysaa in la yareeyo xaddiga 5,000-daawade ee ku aaddan dhacdooyinka waaweyn haddii isla shuruudaha la buuxiyo.
Goobaha wax lagu cuno ee u hoggaansan tallaabooyinka ka hortagga fayraska ayaa loo oggolaan doonaa inay u adeegaan aalkolada, halka kooxaha ka weyn afar ay wada cuni karaan.
Qaar ka mid ah khubarada caafimaadka ayaa ka dhawaajiyay walaac ah inay tahay waqti hore in dadka loo oggolaado inay ku noqdaan noloshooda caadiga ah maadaama Japan aysan weli xakameyn faafitaanka fayraska.
"Waxaan si taxaddar leh u eegeynaa xaaladda nidaamka caafimaad ee hadda jira go'aanna ka gaarno" xaaladda degdegga ah, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Yoshihide Suga.
Harry S. Johnson wuxuu ka shaqeynayay warshadaha safarka muddo 20 sano ah. Wuxuu bilaabay shaqadiisa safarka isagoo ka mid ahaa shaqaalaha duulimaadka ee Alitalia, maantana, wuxuu u shaqeynayay TravelNewsGroup oo ah tifaftire 8-dii sano ee ugu dambeysay. Harry waa safar aad u jecel globetrotting.
Warbixinta Norton: Fadeexadaha taageerada tiknoolajiyadu waa No. 1 ...
Dabaaldegyo Farxad Leh Iyadoo Seychelles Hadda Ka Gudubtay 2020 ...
Qaababka safarka cusub: Kharashaadka safarka oo sare u kacaya iyo ...
Allegiant wuxuu ku dhawaaqay duulimaadyo cusub oo aan joogsi lahayn ee Key West
Safarka meheraddu wuxuu u arkaa faa iido kadib COVID-US
Duulimaadyo dheeraad ah oo ku socda Bonaire oo ka yimid USA kuna socda Delta, American ...
Guddoomiyaha Fulinta ee Sandals® Resorts ayaa loo aqoonsaday inuu yahay mid caalami ah ...
Ajaanibta si buuxda loo tallaalay ayaa Sydney ka soo booqan kara ...
Guddoomiyaasha IATA ayaa u magacaabay madaxa shirkadda Pegasus Airlines ...
Fraport AG waxay si guul leh u dhigeysaa warqad ballanqaad ah
Seychelles waxay u furmaysaa Koonfur Afrika
Sida Loo kasbado Shahaadadaada Nomad Dijital ah
Dalxiiska tallaalka: ma wanaagsan yahay, ma xun yahay mise waa dan la'aan?
Qatar Airways iyo RwandAir oo Shaaciyay Heshiiska Khadka
Goobaha Dalxiiska ee Sandals -ka ayaa Dabaaldeg Muhiim u ah ...
Hoteelada Hawaii ayaa Lacag ka badan ku soo jiidaya 2dii Sano ee la soo dhaafay
Phuket Sandbox: Ha nagu soo darin inta kale ...
Badbaadi oo barwaaqoo! UNWTO, waa waqtigii dib loo qaabayn lahaa ...
Xawaaraha iibsaduhu wuxuu sii socdaa daabacaaddii 10aad ee IMEX ...
Socdaalka Xadidan ee Hawaii 2 Bilood oo Kale
Lithuania iyo Kazakhstan ayaa bilaabaya rakaab toos ah ...
Duulimaadyada aan joogsiga lahayn ee Toronto ilaa Dublin ee WestJet hadda
Rasaasta La Riday: Dhismaha Pentagon -ka ee Xiritaanka
Bixiyayaashii ugu waaweynaa bishii koowaad ee Phuket ...
Magacyada Domain For Sale
Sandals Royal Curaçao waa war wanaagsan dalxiiska Curacao
Yaa martigelin doona UEFA Euro 2028?
Kooxda Ascott Sun: Iskaashi Cusub - iyo waxa ...
Dhimasho, dhaawac, burbur ayaa lagu soo waramayaa in uu ahaa dhulgariir weyn ...
Abuuritaanka Maison Décotterd waxaa u dabaaldegaya ...